Wzọ 5 maka ndị ọhaneze na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji meziwanye oghere ha | Martech Zone
Tuzdee, Machị 8, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Nhazi onwe na-abawanye ọnụego ntụgharị. Nke ahụ abụghị tiori, ịrụ ọrụ nke onwe a nwapụtaala ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara mmekọrịta ọha na eze, ntụgharị gị bụ ike gị ịnweta akwụkwọ ma ọ bụ mmetụta na-ekekọrịta akụkọ ma ọ bụ ihe omume nke onye ahịa gị. Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya na nnabata ahụ na-enyere aka na mgbanwe ahụ, mana ndị ọkachamara na-aga n'ihu ibibi mmekọrịta ha (cheta… nke ahụ bụ R na PR) yana sistemụ na usoro ọgbụgba na usoro.
Anyị edeela ma kesaa otu esi ede blọgụ tupu. Anyị ekekwala otú B NOTGH pitch pitch a blogger. Ma n'ụzọ ahụ, anyị ekekọrịtala ngwa ọrụ mgbasa ozi na-enyere ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze aka ịkwado kọntaktị ịkpọtụrụ ha ma rụọ ọrụ ka mma nke iwulite mmekọrịta ha na ha. Ntuziaka: Ọ naghị ewu email cheesy nke meghere na ị bụrụla onye na-achọ ogologo oge, na ị gụrụ akwụkwọ_____ na nso nso a, ị ga-achọ ịkekọrịta ozi gbasara onye ahịa gị. #anya
New nyocha site na Cision na-egosipụta ebe ndị ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze kwesịrị imeziwanye na:
79% nke ndị na - eme ihe ike chọrọ ka ndị ọkachamara PR mee ka ọkpụkpụ ndị dabara nke ọma na mkpuchi ha
77% nke ndị na-eme ihe nkiri chọrọ ka ndị ọkachamara PR ghọta nke ọma nzụlite ha.
42% nke ndị na-eme ihe nkiri chọrọ ka ndị ọkachamara PR nye ozi na akụrụngwa ọkachamara.
35% nke ndị na - eme ihe chọrọ ka ndị ọkachamara PR na - asọpụrụ mmasị ha, nke 93% họọrọ email.
Ikekwe ihe kachasị mkpa bụ na 54% nke ndị nta akụkọ na-agbaso akụkọ a ma ama n'ihi nkọwa zuru ezu gụnyere na ngwaahịa, ihe omume ma ọ bụ isiokwu isiokwu. Ihe dị mkpa! Naanị ọnụ ọgụgụ m na-agwụ ike na akụkọ ahụ dum bụ na a na-ewere ọkwa mgbasa ozi dị mkpa nye ndị nta akụkọ. Echere m na nke ahụ bụ
Guo Steeti nke Media 2016 si Cision
Anyị ga-ama ụlọikwuu ụbọchị niile Martech Zone na m nwere a ole na ole nke PR ọkachamara na mgbe niile nwere ntị m n'ihi na ha na-akwanyere oge m mgbe pitching a akụkọ. Naanị ọnụ ọgụgụ m na-agwụ ike na akụkọ ahụ dum bụ na a na-ewere ọkwa mgbasa ozi dị mkpa nye ndị nta akụkọ. Echere m na nke ahụ bụ nkọwa doro anya kachasị mma. Achọghị m ịma ma ọ bụ akụkọ mgbasa akụkọ ma ọ bụ akụkọ edere ederede nke ọma… mana anaghị m achọ maka mbipụta akụkọ ma ọ bụghị ogologo oge.
Tags: 2016nkenkeinfographicọkwaịkụ ọkpọprmmekọrịta ọhanezeọkwa ọha na ezeala nke mgbasa ozi
Compass: Chọpụta Àgwà Na-eme Ka Njide Ndị Ahịa